Nhazi adịghị akpaghị aka | Martech Zone
Nhazi adịghị akpaghị aka
Monday, September 21, 2015 Fraịde, Septemba 25, 2015 Douglas Karr
Direct nzaghachi site na email, Facebook na Twitter na-na-na-na-ọzọ ọkaibe, ikwe ka ndị mmadụ na-eji dochie udọ na ha ozi. Ngwa ngwanrọ na-emehie nke ịkpọ nke a keonwe. Nke a abụghị ịhazi onwe.
Nke a bụ nhazi, ọ bụghị keonweMa a ghaghị iji nlezianya mee ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, enwere ike iwere ya dịka enweghị ezi obi. Ọ bụrụ na ị chọrọ hazie ozi m, enweghi ike akpaghị aka. Abụ m mmadụ - nwere uto pụrụ iche, ahụmịhe na mmasị.
Nke a bụ ihe atụ nke ihe ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-akpọ nkeonwe:
Douglas Karr - Daalụ maka isoro m, budata ebook m na blah, blah, blah
Nke ahụ abụghị ahaziri… ederede nkeonwe nwere ike ịbụ:
Doug, nwee ekele maka ihe ndị a. Naanị lelee blọọgụ gị ma hụ ọkwa ọhụụ na xyz
Ndị ụlọ ọrụ nwere nnukwu ìgwè ndị na-eso ụzọ ha nwere ike ịrụ ụka na ha enweghị akụrụngwa iji zaghachi onwe ha. Aghọtara m. Nke a bụ azịza ka mma:
Olileanya na ị na-eche na akpaghị aka omume… dị ka a ekele, lelee anyị ebook na blah, blah, blah.
Nke a apụtaghị na m ekwenyeghị na akpaaka na nhazi. Ọ bụrụ na emechara ya, ọ nwere ike inye ahụmịhe pụrụ iche. Ndị na-ere ahịa kwesịrị iji mmasị ndị ahịa mee ihe iji bulie ma dọọ ahụmịhe maka ihe ndị ahịa na-achọ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụlite onwe na ngwa, enwere ike ịnabata ụzọ abụọ dị iche iche:
Nhazi nke na-enye ohere onye ọrụ ịkọwa ahụmịhe ahụ, ọ bụghị ndị na-ere ya.
Nhazi nke n’enye ndi n’ere ahia ohere itinye 1: 1 izi ozi nye onye ọrụ nke ejiri ezi obi dee.
naanị 20% nke CMO na-eme ka netwọkụ mmekọrịta na-arụ ọrụ na ndị ahịa. Ouch… nke ahụ abụghị nke onwe. Mgbasa mgbasa ozi emeela ka ndị ahịa nweta ụzọ iji nweta ụdị ndị na-enweghị ihu na enweghị aha. Ndị ọrụ ugbu a nwere ohere iji soro ndị ahịa ha nwee mmekọrịta.
The uru nke na-elekọta mmadụ media n'elu gara aga ụdị nke mgbasa ozi bụ ikike na-onwe solutions ma ihe ngwọta na-eweta na-anọgide na-agbalị ịzụlite usoro adịgboroja na personalization. Ndị na-ere ahịa nwere ohere karịa mgbe ọ bụla ọzọ ịsọ mpi asọmpi ha site na ịme mmekọrịta onwe ha nke na-ewulite ntụkwasị obi na ikike na ndị ahịa ha. Emeghị nke ahụ iji ụdọ dochie anya.
Tags: keonweelekọta mmadụ mediammadụ mgbasa ozi nkeonweọkụ ọkụ
Backlink: Nkọwa, Ntụziaka, na Ize Ndụ
Dochie Mkparịta Ọrụ Mgbasa Ozi Gị 'na Mkparịta ụka Ndụ
Sep 23, 2010 na 12:45 PM
Right, Maazị Karr. Zingtụnanya (ma, ọ bụghị) na ụdị anaghị enweta ya, ma ọ bụ na anaghị enweta ya nke ọma. Ikekwe ha karịrị akarị? N'ezie ọ bụghị enweghị mmasị ma ọ bụ enweghị mmasị.